ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အဓိကအခြေအနေ ၅ မ်ဳိး - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အဓိကအခြေအနေ ၅ မ်ဳိး
စက်တင်ဘာ 14, 2017 Assoc. Prof. Boonsri Chanrachakul, M.D.
အမျိူးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မိမိ၏သားအိမ်အတွင်းမှ ရင်သွေးငယ်လေးကို ကျန်းမာစွာမွေးဖွားလာရန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းသည် မိခင်လောင်းများအတွက် အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့် နက်နဲသိမ်မွေ ့သောအချိန်ကာလပဲဖြစ် ပါသည်။ အကယ်၍ မိခင်လောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ ချိန်အတွင်း မိမိ၌ ကျန်းမာရေးချိူ ့တဲ့မှုများရှိပါက ၄င်းသည် မိမိနှင့် သားအိမ်အတွင်းရှိ ကလေးငယ်အား များစွာအကျိူးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင် ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးအနေဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောလက္ခဏာများ နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေမျိူးကြုံတွေ ့လာရပါကမပေါ့ဆသင့်ပါ။ဤကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေမျိူးနှင့်ကြံု ့တွေ ့လာပါက တိကျမှန်ကန်သော ရောဂါလက္ခဏာအမည်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီ ဆေးကုသမှုအတွက်ထိရောက်စွာအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သော ကျွမ်းကျင် သမားတော်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုကို ချက်ချင်းပြုသင့်ပါသည်။ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း အခြေအနေ ကို မည်ကဲ့သို ့သော ရောဂါလက္ခဏာ အမျိူးအစားများဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါသလဲ?၄င်းရောဂါလက္ခဏာအခြေအနေများကို ရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့။
၁. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း မိန်းမကိုယ်မှသွေးဆင်းခြင်း
သွေးဆင်းမှုပမာဏအနည်း၊အများအပေါ်မူတည်၍သိသာကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အနေ ဖြင့်မိမိသွေးဆင်းပမာဏအပေါ်မူတည်၍ဂရုမပြုဘဲမနေသင့်ပါ။မျိူးအောင်သောမျိူးဥဟာသားအိမ် အတွင်းရှိနံရံ များတွင်၄င်းဘာသာသန္ဓေတည်ခြင်းဖြင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်လာကာမိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းမှုဖြစ် စေတတ်သည်။သို ့သော် မိန်းမကိုယ်သွေးဆင်းခြင်း (သို ့) အစွန် ့အပြောက်များ ဆင်းခြင်း ၏ အချိူ ့သော အကြောင်းတရားများဟာကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း(သို့)သန္ဓေသားမှာပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာတွင်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဝမ်းဗိုက်နာကျင် ခြင်းနှင့် သွေးဆင်းပါက လမစေ့မွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေနိုင် ပါသည်။
ဤကဲ့သို ့ဖြစ်ပေါ်ပါကဆရာဝန်ဆီသို ့သွားရောက်ကုသမှုခံယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
၂. ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း (သို့)နာကျင်ခြင်း
ရောဂါလက္ခဏာများဆင်တူခြင်းကြောင့်၊ တချိူ ့လူများက ၄င်းနာကျင်ခြင်းလက္ခဏာများမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသော နာကျင်ခြင်းဟုသာယူဆသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တွင် ၄င်းကဲ့သို ့ဆင်တူ လက္ခဏာများ မှာဖြစ် လေ့ရှိသည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော အစာခြေ ဖွဲ ့စည်းပုံစနစ် လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ပုံမှန်ထက်နှေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိခင်လောင်း ဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း (သို ့)လေထခြင်းကို လည်းခံစားရနိုင် သည်။ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ထူလာကာ သားအိမ် ဟာလည်း ဆွဲဆန် ့လာပြီ ဆ့ံဝင်နိုင်ရန် မိခင် ၏ဆီးအိမ် ကို တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာသော ဝမ်းတွင်းသန္ဓေသား က ဖိအားများပေးသည်။ ၄င်းအကြောင်းတရား အားလုံးကြောင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းကျင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (သို ့)သားလျှောခြင်း ရောဂါလက္ခဏာများ ဟာကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆို မိခင်လောင်းများအနဖြင့် အထူးဂရုပြုသင့်ပါသည်။
၃. မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် အမြင်မရှင်းလင်းခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးများတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော လက္ခဏာများပဲဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို ့မူးဝေခြင်း၊ မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းတို ့သည် ရေဓါတ်ကုန်ခမ်းလာခြင်း ၊ ဟော်မုန်းများပြောင်းလဲလာခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှူ၊ ပင်ပန်းနွမ်းလျမှုအစရှိသောအကြောင်းအရာများကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄င်းရောဂါလက္ခဏာများသည်ပို၍အန္တရာယ်ရှိသောကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်သောရောဂါလက္ခ ဏာအလားအလာအဖြစ်သတိပေးလျက်ရှိသည်။လက်ချောင်းများနှင့် ခြေချောင်းများ ရောင်အမ်းပါက ၄င်းသည် ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်သော အလားအလာပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါသည်။
၄။ ရေဆာခြင်းနှင့် လွန်ကဲစွာချွေးထွက်ခြင်း
မိခင်၏ သားအိမ်အတွင်းမှ မွေးဖွားလာမည့်ကလေးငယ်လေး ဖွံ ့ဖြိူးလာသောအခါ မိခင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ရှိသော အချိူ ့အရည်များဟာ ကလေးငယ်ဆီသို ့ဖြတ်သွားခြင်းကြောင့် မိခင်လောင်းဟာ မကြာခဏ ရေ ဆာလေ့ ရှိသည်။ မကြာခဏရေဆာခြင်း နှင့် ချွေးများထွက်ပါက ၄င်းသည် ထိပ်တိုးလာသော ရောဂါသစ် ဖြစ်သော ဆီးချိူရောဂါလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၅. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ရက်သတ္တပတ်၂၀ကျော်ချိန်အထိသန္ဓေသားလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်(သို့) သန္ဓေသားလှုပ်ရှားမှု နည်းပါးလားခြင်း
မမွေးဖွားခင်ကလေးငယ်ဟာမိခင်၏သားအိမ်တွင်းမှနေ့စဉ်ကြီးထွားလာသည်။ကလေးငယ်ကြီးထွားလာသည်နှင့်တပြိုင်နှက်သားအိမ်အတွင်းကလေးငယ်လုပ်ရှားဖို့နေရာနည်းလာပါသည်။လုပ်ရှားမှုဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနှေးလာပြီ မလှုပ်မယှက်(သို ့)ဆိတ်ငြိမ် နေခြင်းသည် သက်သောင့်သက်သာစွာ အိပ်စက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံတွင် မိခင်များဟာ ၄င်းခံစားမှုမျိူးကို ခံစားနေကျဖြစ်လာကာ ကလေးငယ်အိမ်နေသည် ဟုထင်မြင် ယူဆသည်။ တကယ်တော ့ကလေးငယ် လှုပ်ရှားမှုနည်းလာခြင်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကဲသို့ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါက၊တစုံတခုမှားယွင်းနေပြီးဖြစ်ကြောင်းယူဆခြင်းသည် လုံခြုံစိတ် အချရဆုံးဖြစ်ပင်ဖြစ်လိမ့်သည်။ ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်တွေ ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့်ပတ်သက်သော ဆေးစစ်ချက်များ ပုံမှန်ပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများသည်မွေးဖွားလာမည့်ကလေးငယ်နှင့်မိခင်လောင်းများကျန်းမာရေးအတွက်အ တွက်ဆောင်ရွက်သင့်သော အကောင်းဆုံးအချက်များဖြစ်ပါသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အဓိကအခြေအနေ ၅ မ်ဳိး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိူးသမီးအနေဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောလက္ခဏာများ နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေမျိူးကြုံတွေ ့လာရပါကမပေါ့ဆသင့်ပါ။ဤကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေမျိူးနှင့်ကြံု ့တွေ ့လာပါက တိကျမှန်ကန်သော ရောဂါလက္ခဏာအမည်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီ ဆေးကုသမှုအတွက်ထိရောက်စွာအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သော ကျွမ်းကျင် သမားတော်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုကို ချက်ချင်းပြုသင့်ပါသည်။
User rating: 2.99 out of5with 154 ratings